Ronaldinho Oo Sheegay In Tababare Allegri Awgii Uu Ugaga tegey Kooxda AC Milan - jornalizem
Ronaldinho Oo Sheegay In Tababare Allegri Awgii Uu Ugaga tegey Kooxda AC Milan
Ronaldinho ayaa waxa uu sheegay in uu ku qasbay in uu ka tago AC Milan tababare Massimiliano Allegri xilligii uu u ciyaarayay kooxda Milan.
Weeraryahanka reer Brazil ayaa laga iibiyey kooxda Flamengo xilli ciyaareedkii ugu horeeyey ee Allegri uu tababare ka noqdo San Siro,waxana uu xusay Ronaldinho in aysan u furneyn wado kale oo aan ka ahayn inuu isaga tago kooxda.
“Waxaan ahay laacib jecel in mar walba uu ciyaaro balse Allegri marar badan ayuu iga reebay kooxda,”ayuu yiri Ronaldinho.
“Arrintan ayaa aad iiga xanaajisey, aad ayaan u wanaagsanaa markii aan Milan joogay balse tababaruhu iima oggolaanin inuu i siiyo fursad aan isku soo bandhigo taasna waa sababtay keentay inaan ka tago AC Milan.”
“Marka aan tababarka qaadanayno 9.30am, ciyaartoy badan waxa ay iman jireen xilligaa oo toban daqiiqo ay ka dhiman tahay anigana waxaa iman jirey garoonka iyadoo ay 45 daqiiqo ka dhiman tahay waqigaas si aan u qaato jimicsi ama aan xitaa fariin iska dirsado ama koob qaxwo ah sii cab. Taasina waa dhaqanka ciyaaraha aad ka hesho kadib sanado badan oo waayo-aragnimo ah.
Ronaldinho waxa uu sheegay in aan la tixgelin jirin shuruucda xilligii uu la joogay AC Milan gaar ahaan waqtigii uu tababaraha ka ahaa Allegri.
Rino Gattuso ayaa sidoo kale toddobaadkan soo jeediyey eedeymo kuwan oo kale ah isagoo sheegay in xilligii Allegri aysan jirin wax kala dambayn ah kooxda Milan.